Moments leh saaxiibo 14
Ma jiraa qof garanaya meesha ay udhexeyso qorraxdayada iyo meerayaasha qorraxdu u muuqdaan inay ku soo noqonayaan? Waxaan aqriyay inay noqon karto Alcyone ama Sirius.
Xirfadlayaasheeda wali go'aan kama gaarin xiddigtu xarunta dhexe ee aduunku ku leeyahay toto. Mid kasta oo ka mid ah xiddigahaas oo loo maleynayay inay xarun u yihiin baaritaan dambe ayaa lagu ogaadey inuu naftooda dhaqaaqayo. Ilaa iyo inta cilmu-nafiyeyaashu ay ku hayaan uun dhinaca jirka ee cilmiga xiddigiska, ma ogaan karaan xarunta. Xaqiiqdu waxay tahay, mid ka mid ah xiddigahaas oo la arkay ma aha xarunta adduunka. Bartamaha aduunku waa mid aan la arki karin oo aan lagu ogaan karin telescopes. Waxa ka muuqda dunida oo dhan waa qayb yar oo ka mid ah adduunka guud, isla dareenkaasna waxa laga arkay dadka, jirkiisa jidhku, waa qayb yar oo ka mid ah ninka dhabta ah. Jirka jidhka, ha ahaato ninka ama adduunka, wuxuu leeyahay mabda 'aasaaseed oo wadaagta walxaha muuqda ee jirka ah. Iyada oo loo marayo mabda'dan qaab dhismeedka ah ayaa ku shaqeyneysa mabda 'kale, oo ah mabda'a nolosha Mabda'a nolosha ayaa ku fidsan oo dhaafsan jireed iyo mabaadi'da qaab dhismeedka ah waxayna xajineysaa dhammaan walxaha jirka jirka iyo dhammaan xubnaha jirka meel bannaan. Mabda'a nolosha ayaa laftiisa lagu soo daray mabda 'weyn, kaas oo, maskaxda aadanaha, uu yahay mid aan xad lahayn sida booska. Mabda'aasi waxaa gacanta ku dhigay qorayaasha diimaha iyo buugaagta sidii Eebbe. Waa Maskaxda Caalamiga ah, oo ay ku jiraan wax kasta oo muujinta ah, la arki karo ama aan la arki karin. Waa mid caqli badan oo wax walba awood leh, laakiin aan lahayn qaybo isku macno ah in boosku aanu lahayn qaybo. Dhexdeeda gudaheeda guud ahaan dunida guud ahaan iyo wax waliba oo nool oo dhaqdhaqaaqa oo leh jiritaankooda. Tani waa xarunta adduunka. "Xaruntu meelwalba ayay joogtaa meeraha wareegaana ma jiro."
Waa maxay wadnaha garaaca wadnaha; Miyuu yahay hirarka mawjadaha qorraxda, sidoo kale waxa ku saabsan neefsiga?
Feejignaanta qorraxda ma keenayso wadnaha inuu garaaco, in kasta oo ay qorraxdu la xiriirto wareegga dhiigga iyo nolosha dunida oo dhan. Mid ka mid ah sababaha garaaca wadnaha waa ficilidda neefta ee dhiigga maadaama lagala xiriiro sambabbada sambabada, qolalka sambabka ee sambabbada. Tani waa ficil neefsiga jirka ah ee ku saabsan dhiigga jirka, xarunta weyn ee ay wadnaha tahay. Laakiin ficil neefsiga jirka ah maahan sababta dhabta ah ee garaaca wadnaha. Sababta ugu weyni waa joogitaanka jirka ee maskaxda maskaxda oo gala jidhka dhalashada oo ahaata inta lagu gudajiro nolosha jirka. Jiritaankan nafsiyeed wuxuu la xiriiraa mid kale oo aan jirka ka mid aheyn, laakiin ku nool jawiga jirka, ku hareereysan kuna dhaqma jirka. Tallaabada iyo dhexgalka labadan qaybood, neefsashada gudaha iyo dibeddu waxay kusii socotaa nolosha. Qeybta maskaxda ee jirka waxay ku nooshahay dhiiga si toos ahna waxaa ugujirtaa qeybta cilmi nafsiga ee ku nool dhiiga wadnaha waxaa sababay garaacista.
'Qalbiga mid' waa maado aad u ballaaran; “Neefsashada” waa maado aad u weyn; wax badan ayaa laga qori karaa. Si aan uga jawaabno qaybta ugu dambeysa ee su'aasha: "sidoo kale waxa ku saabsan neefsashada" waa in nala ogeysiiyaa "waxa ku saabsan."
Waa maxay xiriirka u dhexeeya wadnaha iyo shaqada jinsiga-sidoo kale neefsiga?
Qalbiga ninku wuxuu si sax ah u oran karaa inuu ku fido jirka oo dhan. Meel kasta oo halbowlaha, xididdada ama xarkaha ay jiraan, waxaa jira caqabadaha wadnaha. Nidaamka wareegga dhiigga ayaa kaliya ah goobta waxqabadka dhiigga. Dhiigu waa dhexda neefsiga ee isgaadhsiinta xubnaha iyo jidhka. Dhiiggu, haddaba, waa farriinta u dhexeysa neefta iyo xubnaha galmada. Waxaan u neefsannaa sambabaha, sambabaha ayaa hawada ugu gudbiya dhiigga, ficilku wuxuu dhiiga galiyaa xubnaha galmada. Gudaha tifaftiraha Zodiac, V., oo ka muuqday "Ereyga," Vol. 3, p. 264-265, Qoraagu wuxuu ka hadlayaa qanjirada Luschka, xubinta gaarka ah ee rabitaanka, sida rabitaanka galmada. Halkaas waxaa lagu caddeeyey in dhiigkasta oo la isku shubo uu kicinayo oo uu wax ka qabanayo qanjirada Luschka iyo in xubnahan midkoodna u oggolaado xoogga ka dhex socda in uu hoos u sii maro ama kor u kaco. Hadduu hoos u sii socdo, hore ayuu u sii baxayaa, isagoo la shaqeeya xubna ka soo horjeedda, taas oo ah bikro, laakiin haddii ay kor u kacdo waxaa lagu sameeyaa in lagu sameeyo neefta doonida oo ay jidkeedu ku socdo lafdhabarta. Wadnuhu waa saldhigga dhiigga, sidoo kale waa hoolka soo dhoweynta halkaas oo dhammaan fikradaha gala jirka soo gala ay maskaxda ku hayaan dhagaystayaasha. Fikradaha dabeecadda galmada waxay jidhka ku galaan xubinta taranka; way kacaan oo waxay codsadaan gelitaanka wadnaha. Haddii maskaxdu siiso iyaga dhagaystayaasha wadnaha oo ku madadaalayo wareegga dhiigga ee la kordhiyo oo dhiigga loo kaxeeyo qaybaha u dhigma fikirka. Dhiiga kordha wuxuu u baahan yahay neefsasho deg deg ah si dhiiga loogu nadiifiyo oksijiinka ku neefsaday sanbabada. Waxay u baahan tahay soddon ilbidhiqsiyo si dhiiggu uga baxo wadnaha ugana gudbo halbawlaha jirka ilaa geeska jirka una gudbo wadnaha wareega xididka, sameynta hal wareeg oo dhameystiran. Wadnuhu waa inuu si dhakhso leh u garaacayaa oo ay neefsashadu u yaraataa marka fikradaha galmada la madadaaliyo oo xubnaha galmada ay kiciyaan dhiigga ka soo baxa wadnaha.
Cudurro badan oo dabiici ah iyo cabashooyin dareemo ayaa sababa kharashaadka aan faa'iido lahayn ee xoogga nolosha iyadoo loo marayo fikradaha galmada; ama, haddii aysan jirin qarash, dib-ugu-soo-noqoshada dhammaan unugyada neerfaha ee xoogga nolosha ee ka soo laabanaya qaybaha su'aasha ku jira iyo ku soo noqoshada wareegga dhiigga ee xubnaha galmada. Awoodda guud ayaa la dhimaa oo dila dib-u-soo-celinta. Unugyada dhintay waxay u gudbaan dhiigga oo ku faafa jirka. Waxay wasakhoobaan dhiigga iyo cudurrada xubnaha jirka. Dhaqdhaqaaqa neefsashada ayaa astaan ​​u ah xaaladda maskaxda iyo diiwaangelinta shucuurta qalbiga.
Meeqo ayay tahay in dayaxu ay u sameeyaan nin iyo nolol kale oo dhulka ah?
Dayaxu wuxuu u soo jiitaa dhulka magnetic iyo dhammaan dareeraha dhulka. Ballaarinta soo jiidashada waxay kuxirantahay wajiga dayaxa, meeshiisa dhanka dhulka, iyo xilli sanadka. Soojiidashadeedu waxay ku xoog badan tahay dhulleyntu iyo meelaha ugu jilicsan jaranjarada. Saamaynta Dayaxu wuxuu xukumaa kor u kaca iyo dhicitaanka dheecaanka geedaha oo dhan wuxuuna go aansadaa awooda iyo hufnaanta guryaha dawooyinka inta badan dhirta.
Dayaxu wuxuu saameeyaa jirka astral jirka rabitaanka xayawaannada iyo ninka, iyo maskaxda ragga. Dayaxu wuxuu leeyahay dhinac wanaagsan iyo sharba marka loo eego dadka. Guud ahaan ka hadalka dhinaca xun waxaa lagu tilmaamaa marxaladaha dayaxa ee waqtigiisa uu xumaaday; dhinaca wanaagsan wuxuu kuxiran yahay dayaxa laga soo bilaabo waqtiga cusub ilaa dayaxu buuxsamo. Codsigan guud waxaa lagu hagaajiyaa kiisaska shaqsiga ah; maxaa yeelay waxay kuxirantahay xiriirka gaar ahaaneed ee nin ee maskaxdiisa iyo qaab dhismeedka jirka ilaa xadka uu dayaxu saameyn ku yeelan karo. Dhammaan saameynta oo dhan, si kastaba ha noqotee, waxaa laga hortegi karaa go'aan, caqli, iyo fikir.
Qorraxda ama dayaxu miyuu maamulaa ama ma xukumi karaa xilliga fasalka? Haddii kale, maxay tahay?
Qorraxdu ma maamusho muddada; waa arin la wada ogyahay in mudada caadada ay ku soo beegantay marxalado gaar ah oo dayaxu jiro. Haweeney kasta waxay si kala duwan ula xiriiraan Dayaxa qaabkeeda jir ahaan iyo maskax ahaanba; maadaama saameynta dayaxa ay sababeyso oviation waxay raacdaa in isla wajiga dayaxa uusan ku dhicin haweenka oo dhan.
Dayaxu wuxuu keenaa jeermiga abuurku inuu bislaado ugana baxo ugxanta. Dayaxu wuxuu saameyn la mid ah ku leeyahay ragga. Dayaxu wuxuu saameeyaa uurka wuxuuna ka dhigaa wax aan macquul aheyn xilliyada qaar, wuxuuna go’aamiyaa xilliga uur qaadida iyo waqtiga dhalashada. Dayaxu waa qodobka ugu weyn ee hagaajinta muddooyinkan, dayaxu sidoo kale waa cunsurka ugu muhiimsan ee horumarka uurjiifka, maxaa yeelay jirka astral hooyadeed iyo uurjiifku mid walba si toos ah ayuu ugu xiran yahay dayaxa. Qorraxdu sidoo kale waxay saameyn ku leedahay howlaha jiilka; Saameyntu way ka duwantahay tan dayaxa, halka dayaxu uu siinayo tayo magnetic iyo saameyn ku leh jirka astral iyo dheecaanka, qorraxdu waxay la xiriirtaa tayada korantada ama nolosha jirka, iyo dabeecadda, dabeecadda iyo dabacsanaanta jirka. Qorraxda iyo dayaxu waxay saameeyaan ragga iyo sidoo kale naagta. Saamaynta qorraxda ayaa ku xoog badan ninka, dayaxa naagta.